Maalinta: Sebtember 29, 2019
Dhalinyarada Magaalada caasimada ah waxay leeyihiin qaanuun barashada wadada taraafiga ah
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara, Kurtuluş Park oo ku taal Xarunta Tababarka Wadooyinka, habka ugu faca weyn ee loo baro sharciga carruurta yaryar. yar ah; sharciyada dadka lugeeya iyo kuwa raacaaya waa inay raacaan [More ...]
Gaadiidka ka taga Kocaeli iyo Istanbul ayaa fududaan doonta
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa hirgalinta mashaariicda waa weyn si loo helo gaadiid tayo leh oo raaxo leh meelo badan oo magaalada ah. Wadooyinka dhowaan la dhisay waxay dardar gelinayaan isu socodka dadka, iyo wado kale oo gaadiid [More ...]
Hawlaha Gudaha ee 7 Dukaan Car Park ee Gebze ayaa Bilaabmay
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ah inay siiso xadiiq gawaarida xNUMX dabaqa ah mid ka mid ah wadooyinka ugu mashquulka badan ee Gebze. Dhismaha baarkinka wadada ee Gebze Kızılay Street, oo ay xaqiijisay Agaasinka xakamaynta dhismaha, [More ...]
Lixdii Mole ee Magaalada Istanbul! .. Waddooyinka Isku Xidha Mitrooyinka May Sababi karaan Musiibo
Madaxweynaha Dawladda Hoose ee Istanbul CHP Kooxda Tariq Balyali wuxuu sheegay inay jiraan xarumo metroolo ah oo joogsan kara Istanbul muddo 1.5 sano ah. [More ...]
ESTRAM 5 si loo Iibsado Shaqaalaha Joogtada ah
Dawlada Hoose ee Magaalada Eskişehir ESTRAM 5 ayaa ku dhawaaqday ogeysiis joogto ah oo shaqaalaysiin. Sida ku xusan ogeysiiska Nidaamyada xadiidka hadhuudhka ee 1 ee tilmaamaya dayactirka iyo hagaajinta, 4 dayactirka mashiinka dayactirka mashiinka ayaa la shaqaaleysiin doonaa. [More ...]
Goorma ayaa la furayaa Khadadka tareenka ee Samsun Sivas?
Khadadka Tareenka ee Samsun Sivas Goorma ayaa la furi doonaa?: Sababo la xiriira shaqada dayactirka, markii khadka tareenka ee Samsun Sivas maanta la xiray, 4 wuxuu dib ugu noqday sheekada abeesada. Ugu dambayntiina waxa la geliyey bisha Agoosto [More ...]